The SDGs and Me: Youth Video Competition - Be heard and be seen! [scroll down for Myanmar version] | United Nations in Myanmar
‘The SDGs and Me’ aims to raise awareness about the Sustainable Development Goals (SDGs) by giving young Myanmar peopleachance to speak up and share their vision of the future.
Also known as the Global Goals, the SDGs were adopted by all UN Member States in 2015 asauniversal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. This year the United Nations marks its 75th anniversary, and wants people to participate in conversations about its future role.
Today’s youth play an important role in achieving these Goals. Learn more about the SDGs and produceashort video on your smart phone nominating your favourite SDGs and showing how they can improve the lives of people around you.
Be creative and inspire others with your vision of the future.
Individual and team entries are allowed as long as all participants are aged 11-17.
Two prizes of 400,000MMK will be given to the most “Popular” video judged by the highest number of likes on Facebook and “Judges’ Choice” video.
You are free to choose how you present your ideas through your video. Your video could take the form of an inspiring presentation,aperformance or song,amini-documentary, or any other format you choose. The only requirement is that your video should put across your thoughts and ideas relating to your chosen SDG.
But be sure that the content and idea is purely yours and don’t use someone else’s music or work.
Be safe when filming and producing your masterpiece – follow the COVID-19 health and safety guidelines during the pandemic. (https://www.who.int/myanmar/emergencies/covid-19-advice-for-the-public)
Enter the contest by filling in the entry form below.
Email your finished video (maximum3minutes) and your nomination form below. It should be signed by parent or guardian and sent to unrco.myanmar@gmail.com by 5pm Saturday, December 5.
The video must be easily seen onasmart phone, so use “Horizontal” not “Portrait” and be careful with the microphone. We want to hear your voices loud and proud.
Your entry must be created by you or your team usingasmart phone. It must not use material created by other people such as music and songs and video clips unless you have permission in writing from the owners.
Parents/Guardian Name:* _______________________________
*I have seen the content of this entry and I am authorising the UN to use it.
Parents/ Guardian Sign _______________________________
The music used in my entry was created by ______________________ of (email or phone number) _______________________ who has given me permission to use the material.
*The competition is not open to UN employees’ and their families.
စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ နှင့် ကျွန်ုပ် _ လူငယ်ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတိုပြိုင်ပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂသည် အသက် ၁၁ မှ ၁၇ နှစ်ကြားရှိ လူငယ်များကို တစ်မူထူးခြားသည့် လူမှုရေးအသိပညာပေး စမတ်ဖုန်း ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတိုပြိုင်ပွဲသို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ နှင့် ကျွန်ုပ် (‘The SDGs and Me’) သည် မြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်သော လူငယ်များအား အနာဂတ်အပေါ် ၎င်းတို့၏ အမြင်ကို ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် ဝေမျှရန် လုပ်ဆောင်လျက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်၊ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လူသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုခံစားရရှိစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ကြရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များဟုလည်း လူသိများသော “SDGs” ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတစ်ရပ်အဖြစ် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။ ယခုနှစ်သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ၇၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူများအား ၎င်း၏ အနာဂတ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများတွင် ပါဝင်စေလိုသည်။
ထိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသို့ အောင်မြင်စွာရောက်ရှိရန် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ SDGs နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဤနေရာတွင် လေ့လာ၍ မိမိအနှစ်သက်ဆုံးသော ပန်းတိုင်ကိုရွေးချယ်ကာ ထိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ သူများ၏ ဘဝများကို မည်သို့ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ကို ပြသခြင်းဖြင့် ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတိုလေးကို စမတ်ဖုန်းဖြင့် ဖန်တီးလိုက်ပါ။
အနာဂတ်အပေါ် သင့်အမြင်ကို စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းများဖြင့်ဖန်တီးပြီး အခြားသူများအားကျအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြားရှိသော ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတိုပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
Facebook မှ Like အများဆုံးရရှိသည့် “လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယို” နှင့် “ဒိုင်အဖွဲ့မှရွေးချယ်သော ဗီဒီယို” ကို ဆုငွေအဖြစ် ငွေကျပ် ၄၀၀,၀၀၀ စီပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည်။
သင့်ဗီဒီယိုကို သင့်စိတ်ကူးဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးတင်ဆက်နိုင်သည်။ သင့် ဗီဒီယိုကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော တင်ပြမှုပုံစံ၊ ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုခု (သို့) သီချင်း၊အသေးစား မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့် တင်ဆက်ပုံတစ်ခုခုဖြင့် ဖန်တီး တင်ဆက်နိုင်သည်။သို့သော် သင့်ဗီဒီယိုတွင် သင်ရွေးချယ်ထားသည့် SDG နှင့်ချိတ်ဆက်သော သင့်၏ အတွေးအမြင်၊ အိုင်ဒီယာများ ပါရှိရမည်။ ထိုဗီဒီယိုတွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းသည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်သာ ဖြစ်ရမည်။ အခြားသူများ ဖန်တီးထားသော တေးဂီတ သို့မဟုတ် အခြားဖန်တီးချက်များကို အသုံးမပြုရပါ။
ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေး လမ်းညွှန်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာလျက် လုံခြုံဘေးကင်းစွာဖြင့် သင်၏ အကောင်းဆုံးလက်ရာ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတိုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို ဖြည့်ပြီး ပြိုင်ပွဲသို့ဝင်‌ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ သင့်၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူ (ကြာမြင့်ချိန် ၃ မိနစ်ထက်မပိုသော) သင်၏ ပြိုင်ပွဲဝင်ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတိုကို ကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါ။ လျှောက်လွှာတွင် သင့်မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူ၏ လက်မှတ် ပါရှိရမည် ဖြစ်ပြီး unrco.myanmar@gmail.com သို့ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့၊ စနေနေ့၊ ညနေ ၅ နာရီအချိန် နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရမည်။
ပြိုင်ပွဲဝင် ဗီဒီယိုသည် စမတ်ဖုန်းဖြင့် အလွယ်တကူ ကြည့်၍ရသော ဗီဒီယိုဖြစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် “‌ဒေါင်လိုက် အနေထား” မဟုတ်ဘဲ “အလျားလိုက် အနေထား”ဖြင့် ဖန်းတီးပြီး စမတ်ဖုန်း၏ မိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့် အသံကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖမ်းယူပါ။ သင့်၏ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ပြောဆိုတင်ပြချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျယ်‌လောင်စွာကြားလိုပါသည်။
သင် (သို့မဟုတ်) သင့်အဖွဲ့၏ ပြိုင်ပွဲဝင် ဗီဒီယိုသည် စမတ်ဖုန်းဖြင့် ရိုက်ကူး ဖန်တီးထားသော ဗီဒီယိုဖြစ်ရမည်။ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ဗီဒီယိုတွင် ‌သီချင်း၊ တေးသွား နှင့် ဗီဒီယို အရုပ်ကဒ်များသည် မူရင်းဖန်တီးထားသူများထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရထားသောအရာများမဟုတ်ပါက အခြားသူများ ဖန်တီးထားသော အရာများ မပါရှိရပါ။
မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ အမည်* _______________________________
*ကျွန်တော်/ကျွန်မသည် ယခုဝင်‌ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ဗီဒီယိုပါအကြောင်းအရာများကို သိရှိထားပြီး ဖြစ်ပြီး UN အား အဆိုပါ ဗီဒီယိုကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။*
မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ လက်မှတ် _______________________________
ကျွန်တော်/ကျွန်မ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ဗီဒီယိုတွင် ______________________ ၏ (၎င်း၏ အီးမေလ်း (သို့) ဖုန်းနံပါတ်) _____________________ တေးသွား/သီးချင်းကို ထည့်သွင်းဖန်တီးထားပြီး အဆိုပါ တေးသွား/သီချင်းအား ဤဗီဒီယိုတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း ၎င်းထံမှ ရရှိထားပါသည်။
* ပြိုင်ပွဲသို့ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိပါ။
Nay Pyi Taw, Myanmar – The launching ceremony of Myanmar National Strategic Plan for Youth Policy (2020-2024) was held in Nay Pyi Taw.